Iindaba -Ukuhamba kunye nophuhliso lwezixhobo zomatshini
Ukuhamba kunye nophuhliso lwezixhobo zomatshini
Ukuphuhliswa kwezixhobo zomatshini akunakwahlulwa kwiimfuno zophuhliso zeshishini lokuvelisa elizayo. Umzekelo, ukukhula kwamashishini afana namandla, ukutya, ubunjineli kwezonyango, unxibelelwano, imoto kunye noomatshini bezolimo kuya kuba nefuthe elikhulu kuphuhliso lwezixhobo zoomatshini kwixa elizayo.
Umzekelo, izixhobo kumashishini afana namandla kunye noomatshini bezolimo ngokubanzi ngoomatshini abakhulu. Xa kusetyenzwa kwezi zixhobo, isixhobo somatshini kufuneka sibe netorque ephezulu yokuluka, amandla aphezulu okuluka kunye nendawo enkulu yokusebenza. Imfuno ethile yezixhobo zomatshini kukuba nemisebenzi yesiko ngakumbi endaweni yoomatshini abathile.
Izixhobo kubunjineli kwezonyango, unxibelelwano kunye namanye amashishini ngokubanzi zizixhobo ezincinci. Amacandelo ezi zixhobo aya esiba mancinci kwaye emancinci, ulwakhiwo luya ludibana ngakumbi, kwaye iindawo zokusika ezahlukeneyo ziyafuneka ngexesha lokulungiswa. Ngamanye amaxesha kuye kufuneke ukuba kusetyenzwe ngezinto ekunzima ukuzisika ezinje ngealloys zetitanium. Ke ngoko, ukuchaneka okuphezulu kunye nokuqina okuqinileyo kuyafuneka ukulungiselela izixhobo zokusebenza. Ngokweemfuno ezithile zemveliso, ubunjineli kwezonyango (izisombululo ezijolise kuzo) zifuna umthamo omncinci kunye nomgangatho ophezulu. Kwintsimi yetekhnoloji yonxibelelwano, ubungakanani obuncinci kunye nokhuphiswano oluphezulu lweendleko ziyafuneka.
Kwimizi-mveliso yokuvelisa iimoto, iyimveliso edityaniswe kakhulu, efuna ukudityaniswa kwetekhnoloji eyahlukeneyo yokuvelisa kwindawo encinci. Oku kufuna ubuchwepheshe obutsha bokuqhubekeka ukucubungula izixhobo zentsimbi ezintsha, kunye noomatshini bokuqhubekeka abatsha bokuqhubekeka izinto ezintsha ezinje ngezixhobo zefiber. Imfuno yeshishini lokuvelisa iimoto kwizixhobo zomatshini kukuba kwixa elizayo, umatshini omnye ungasetyenziselwa ukuqokelela kunye nokudibanisa. Malunga nokusasazwa kwezixhobo zomatshini, izixhobo zomatshini ziyafuneka ukuba zibenendawo enkulu yokulungisa kwaye zilungele ukuveliswa kwezinto ngobuninzi.
Ukujonga iimfuno zeentlobo ezahlukeneyo zamashishini kwizixhobo zomatshini, kwixa elizayo, izixhobo zomatshini kufuneka zihlangabezane nezi mfuno zisisiseko zilandelayo: iimpazamo zokuchaneka ezincinci, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla, ixesha lokulungisa elifutshane, ukusebenza ngokukuko kwezixhobo kunye nozinzo.
Kukho iimfuno ezithile ezahlukeneyo zeemveliso ezahlukeneyo: ubungakanani obahlukeneyo, uluhlu olubanzi lweemveliso, kunye nokulungiswa kwezinto ezintsha.
Zimbini izinto ezenzekayo kuphuhliso lwexesha elizayo lwezixhobo zomatshini: ukuphuculwa kwenkqubo yokuvelisa epheleleyo ehlangabezana neemfuno ezithile zabathengi; kunye nokuphuculwa kokusebenza ngokukuko kunye nokuzinza kwezixhobo.